Sukulahlekelwa lilizwi lakho | Martech Zone
Sukulahlekelwa lilizwi lakho
NgeCawa, ngoFebruwari 10, 2013 NgeCawa, ngoMatshi 24, 2013 Douglas Karr
Ndifumene ingxelo evela kubantu abambalwa ukuba iiposti zethu zamva nje bezikho yomile. Andizukuphikisana naloo nto-besixakekile sisenza uphando olunzulu ngezixhobo kunye neempawu zokufika kade. Kubonakala ngathi xa sisenza nzulu uphando lwethu, kokukhona kunzima ukubhala isithuba esifutshane esenza iqonga lomthetho kodwa uqinisekise ukuba ilizwi lakho liyaviwa.
Lo mhlobo wam ungumfundi onomdla webhlog, kwaye ubhala kuyo ngokunjalo, ke ndimamele kwaye ndiza kwenza utshintsho. Ngomyalezo ngamnye, ndiza kongeza umbala kwincoko nawe. Martech Zone ithatha umbono oqinisekileyo wokuba itekhnoloji ingabanceda njani abathengisi. Isimanga kukuba andinathemba. Ndiziva ngathi intsimi yezixhobo zokusinceda zibanzi kwaye zibhityile-ngamathuba amaninzi kwiinkqubo zentengiso ezinqamlezileyo ezisinceda ukuba sihlangane, silinganise kwaye sisebenzise unxibelelwano lwethu kunye nethemba kunye nabathengi.
Sikwacinga nangokongeza amazwi ngakumbi Martech Zone. Ndicinga ukuba kukho ithuba lokongeza intengiso enkulu okanye itekhnoloji enokuba ikufuphi kumaziko amakhulu entengiso eNew York, eBoston, okanye eSan Francisco. Ukuba umbhali wetekhnoloji… ngakumbi umntu onoburharha, singathanda ukuthetha nawe. Ukukhangela kwethu ukuza kuthi ga ngoku akukhange kukhokelele kwizikhokelo ezininzi.
Buyela kwingoma ...
Umxholo akufuneki ubhalelwe ukubhala umxholo kuphela. Ungaqaphela ukuba umxholo wethu uyaphuma kwaye uyangena. Ezinye zazo zibangelwa ngumthwalo wethu womsebenzi, kodwa amaxesha ngamaxesha kunokuba kungenjalo, yinto nje yokuba singenanto ibalulekileyo yokuthetha. Sifuna yonke iposti yebhlog ukunceda abathengisi. Zonke iiposti.
Kananjalo sandise ilizwi lethu ngepodcast yethu, inkqubo ye-imeyile kunye neevidiyo. Sijoyine amaqela kunye Umda weRadiyo yeWebhu ukuvelisa umboniso woonomathotholo oqeqeshiweyo (oboniswe kwalapha ekhaya) kunye nevidiyo ethile entle. Qiniseka ukuba uvule ngaphakathi-ungasifumana nge App ye-iPhone, iTunes, Stitcher kwaye Youtube.
Andiqinisekanga ukuba ngubani obhale eli gama "kwimidiya yoluntu", kodwa babeqaqambile. Umxholo ngamajelo eendaba… kodwa umxholo ngaphandle kwelizwi awunantlalontle, ulungile eendaba. Ungalahli ilizwi lakho. Yigcine intlalontle.
tags: Intengiso yePodcastUbuntustyleilizwi
Ngaba ngokwenene uyi-1% ye-LinkedIn?